‘हार्दिक आभार’ – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७८, मंगलवार ०९:२४ September 28, 2021
सर्वप्रथमतः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ का क्रियाशील सदस्य साथीहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । साथीहरुले प्रकट गर्नु भएको यो विश्वास प्रति म ऋणी छु ।
नविनिर्वाचित वडा कार्यसमिति तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि अग्रज तथा साथीहरुलाई हार्दिक शुभकाना प्रकट गर्दछु । उपविजेता साथीहरुको योगदानलाई हार्दिक कदर गर्दै आगामी दिनमा उचित व्याक्ति उचित स्थानको आधारमा भूमिका दिलाउनका लागि आँफुले सकेको प्रयास गर्ने वाचा प्रकट गर्दछु ।
एउटा भनाई नै छ – ‘एक माघले जाडो सकिँदैन ।’ गर्नुपर्ने कामहरु निकै धेरै छन् । नेपाली कांग्रेसका सबै साथीहरु एक ढिक्का नभएसम्म चुनौति समाना गर्न सकिन्न भन्ने यर्थाथतालाई हामीले विर्सनु हुन्न । महाधिबशेनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मात्रै हो । वडा तह भन्दा माथिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु बाँकी छन् । यस घडिमा आफ्नो मनमा लागेका र खड्किएका केही कुरा साथीहरु समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु ।
संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार कार्यान्वनका लागि हो पार्टी चाहिने भनेको । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले जनतालाई दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नेपाली कांग्रेसले निर्माण गरेकै छैन । यस्तो अवस्थामा अरू सुझाव दिनुको अर्थ के हुन्छ ? उदाहरणका लागि संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तिमा एक पद महिलाका लागि आरक्षण गरेको छ । सभामुख र उपसभामुखको हकमा पनि यही प्रावधान संविधानमा छ । संविधानले महिलालाई दिएको यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विधानमा पार्टी सभापति र उपसभापति मध्ये कम्तिमा एक जना महिलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ? भोलि राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने महिलालाई पार्टीमा स्थापित गरिएन भने, प्रशिक्षत गरिएन भने संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा राम्रो परिणाम आउँदैन । तर, कांग्रेसले दुई जना उपसभापति र दुई जना महामन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ, तर महिलाका लागि ठाउँ राखेको छैन ।